Shiinaha Qiijiye Qiijiye Gaas-warshadeed iyo shirkado cusub | Mashiinnada Delin
Hebei Delin Makiinado waa mid ka mid ah shirkadaha bamka ugu waaweyn ee ku takhasusay soo saarida bambooyin qulqulaya ee Shiinaha, oo leh dhul ka badan 40,000m2 iyo aagga dhismaha oo ka sarreeya 22,000m2. Wax soo saarka waxaa badanaa loo isticmaalaa weecinta wabiga leexinta, macdanta, metallurgy, qorsheynta magaalada, korontada, dhuxusha, FGD, batroolka, warshadaha kiimikada, wax soo saarka dhismaha, iwm. Taxanaha DSC (R) FGD pump is a type of centrifugal pump, single- nuugid, hal-marxalad ah iyo qaab-dhismeed jiif ah, oo muujinaya faa'iidooyinka heerka socodka ballaaran, waxtarka sare iyo keydinta tamarta. Taxanaha bamka FGD waa nashqado is haysta oo meel lagu keydin karo. Sida soo saaraha bamka slurry xirfadeed iyo alaab-qeybiyaha ee Shiinaha, waxaan soo saarnay qalab kala duwan oo loogu talagalay DSC (R) taxane bambooyin FGD ah.